नमिलेका मधेशिका पाँच मुद्धाहरु के के हुन? (पढ्नुहोस) — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → नमिलेका मधेशिका पाँच मुद्धाहरु के के हुन? (पढ्नुहोस)
नमिलेका मधेशिका पाँच मुद्धाहरु के के हुन? (पढ्नुहोस)
April 15, 2016२०९ पटक
उज्यालो डेस्क, ३ बैशाख, काठमान्डौ
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तत्काल बार्तामा नबस्ने भएको छ। उस्ले प्रमुख तीन दल र सरकारले बोलाउने वार्तामा तत्काल आफू सहभागी नहुने बताएको हो। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नेभन्दा आन्दोलन तुहाउने रणनीतिअनुसार तीन दल र सरकारले वार्तामा बोलाउने गरेको भन्दै मोर्चाले वार्तामा नबस्ने जनाएको छ। मोर्चाले वार्तामा बस्न आनाकानी गर्नुको कारण आफ्ना पाँच मुद्दामा सरकारले बेवास्ता गर्नु रहेको जनाएको छ ।मधेशीले जोड्दार रुपमा उठाएका तर सरकारले सम्बोधन नगरेका ५ मुख्री मुद्धाहरु के के हुन?पढ्नुहोस।
१:मधेसमा दुई प्रदेश
मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने माग मोर्चाको छ । तर, यो मागमा प्रमुख राजनीतिक तीनहरू सहमत हुन सकेका छैनन् । सीमांकनसँग जोडिएको यो मोर्चाको पहिलो माग हो ।
५: बहुराष्ट्रियताको परिभाषा
नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषित गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । तर, प्रमुख दल यो कुरा सबैभन्दा बढी खतरनाक भएको बताउँछन् । तर, पछिल्लोपटक मोर्चाले यो मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन छाडिसकेको छ ।